ဖျော်ဖြေသေလွန်သောသူတို့သည်အဆုံးကောင်လေးချုပ်ကိုင်ထား, JS were developed to grip the ADSS fiber optical cable while construction of internet network lines on wood poles or concrete towers, as analog of classical wedge tension clamps. ADSS cable in applied in telecommunications, and our distribution dead ends are depended by telecom distribution and network construction companies.
ADSS ဝါယာကြိုးလေးကိုဆုပ်ကိုင် preformed, JS ပူသို့ကျဆင်းလာအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးသံမဏိ, ဝါယာကြိုးလှံတံ၏ ASTM A475 စံ၏လုပ်ခဲ့ကြသည်။
ADSS distribution dead ends guy-grip do not require any tool for installation and can be mounted on fiber optic cable ကို, directly. Overhead ADSS dead end JS type do not require and protective rods or side splices, it can be installed straight on the fiber cable jacket.
ADSS preformed ညှပ်အတွက် configuration အလင်း signal ကို၏သွင်းဆုံးရှုံးမှု minimize နိုင်ရန်အတွက်တွက်ချက်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ helical တင်းမာမှုအိမ်မှာရှိနေတဲ့၏အမျိုးပေါင်းအများကြီးသုတေသနပြုခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ဝါယာကြိုးကိုက်ညီနိုင်ကြသည်ယင်း၏အလုပ်လုပ်ဝန်နှင့်အပြင်ဘက်အချင်းအညီ, သင့် ADSS cable ကိုအရွယ်အစားအသေကြီးစွန်းဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
cable ရဲ့အလုပ်လုပ်ဝန် (ဝန်ကိုချိုးဖောက်), KN
ADSS cable ကိုအရွယ်အစား, မီလီမီတာ
ဝါယာကြိုး configuration များ
အမေရိကန်-1 (1-7 KN)
Jera preform လိုင်းကိုထိန်းညှိဖို့နိုင်စွမ်း ADSS ဖျော်ဖြေ အဖြစ်ကောင်းစွာ, ADSS cable ရဲ့သတ်မှတ်ချက်မှညီ, ဒါမှမဟုတ်7ရက်ထဲမှာအတိအကျကို cable ကိုအရွယ်အစားများအတွက်ထုတ်ကုန်အသစ်ဖွံ့ဖြိုး။
ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ခုလုံးကို လိမ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ဝါယာကြိုးထုတ်ကုန် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်နိုင်ရန်အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။
Jera preformed helical လိုင်းထုတ်ကုန် preformed ကောင်လေးချုပ်ကိုင်အသေကောင်ကြီးစွန်းအမျိုးအစားကိုစမ်းသပ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်စမ်းသပ်မှုကိရိယာများ၏ပြီးပြည့်စုံသောအကွာအဝေးရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့ပါဝင်သောသံမဏိဖွဲ့စည်းခဲ့ကောင်လေးအိမ်မှာရှိနေတဲ့၏အရည်အသွေးနှင့်ပြည့်စုံအကွာအဝေးအာရုံစိုက်: ADSS ဖြန့်ဖြူးသေပြီကြီးစွန်းတိုင်အောင် , ကမ်းနားလမ်းကောင်လေးအိမ်မှာရှိနေတဲ့ ,ရပ်ဆိုင်းမှုအိမ်မှာရှိနေတဲ့ ,သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိခြမ်းလည်စည်း ,ဝါယာကြိုးအသေကောင်ကြီးစွန်း drop ,အမွှာဆက်ဆံမှု ,insulator တွင်လည်းထိပ်တန်းဆက်ဆံမှု ,သံချပ်ကာချောင်းတွေ , full tension splices, thimbles, pole fittings (anchor shackles, ball eye), ဝါယာကြိုးဆက်စပ်ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး , motion control damper etc.
ယခင်: ကမ်းနားလမ်းဝါယာကြိုးလေးကိုဆုပ်ကိုင် 38I
နောက်တစ်ခု: ACSR ကောင်လေးချုပ်ကိုင် LJS
overhead ADSS သေလွန်သောသူတို့သည်အဆုံး